Bvisa Background muZimbabwe
4 Nzira dzekubvisa Nhoroondo Kubva paMufananidzo
Unoda kubvisa kumashure kubva kumafaira emifananidzo? Muchinyorwa chino chepamhepo, chiri nezvazvo, ndizvo zvichakurukurwa. Iwe unozodzidza zvese zvaunofanira kuziva nezve manyore ekuchinja mamiriro emifananidzo uye kunyangwe iwe uchingotsvaga nzira dzekubvisa bland chena kumashure. Ichi chinyorwa chepamhepo chizere neruzivo iwe rwaunogona kushandisa kubvisa kumashure kubva kumifananidzo uye chengetedza mari panguva imwe chete.
Nekuuya kwemakomputa, isu tinogona ikozvino kubvisa zviri nyore kumashure kubva pamufananidzo. Kune nzira dzakawanda dzakasiyana uye sarudzo dzekuti isu tibvise pikicha ine kumashure. Tine Photoshop, Paint Shop Pro, Corel Dhonza, PhotoShop, uye Microsoft PhotoShop shanduro. Imwe neimwe ine zvayakanakira nezvayakaipira.
Munguva yakapfuura, kana isu tichida kubvisa kumashure, isu taifanira kutanga nenhamba hombe yezvirongwa uye mashandiro kana kushandisa maawa mazhinji kuyedza kutsvaga nekubvisa zvese zvakashata zviri pachena mumifananidzo yedu. Neraki, netekinoroji yazvino, hatichadi kushandisa nguva yakawandisa futi. Tinogona kungosarudza mazana emazana kana zviuru zvemifananidzo kuti tibvise kumashure kubva pamufananidzo uye titange kugadzirisa. Nesoftware yanhasi, tinogona nekukurumidza uye nyore kusarudza kumashure kuti tibvise uye titange nekugadzirisa mamwe mapikicha. Tinogona kunyange kusarudza zvimwe zvinhu kuti zvibviswe.
Nhasi, zvishandiso zvakajairika zvinoshandiswa kubvisa mabhureki ekumashure. Kune akawanda mabrashi anowanikwa kusarudza kubva. Ivo vane akasiyana maumbirwo uye saizi. Iwo akanyanya kufarirwa iwo emakona emakona uye yakatenderera chimiro bhurasho. Zvichienderana neunyanzvi hwekugadzirisa mifananidzo uye zvaunofarira, unogona kutanga nebrashi rekutanga kana bhurashi repamberi. Kana iwe usina kujairana nerudzi urwu rwekushandisa, unogona kugara uchiedza chimbi chimbi chinokurumidza kuitira kuti utange.
Kune zvakare akakosha maturusi anotibvumidza isu kuti tichinje kumashure. Semuenzaniso, kune mamwe mapakeji ayo anopa bhatani iro rinotibvumidza isu kuti tichinje iyo kumashure kweakawanda mafoto mune imwechete kubaya. Zvakare, kune zvimwe zvishandiso zvinotibvumidza isu kuti tichinje iyo kumashure tichitora akawanda mafoto kamwechete. Ichi chinhu chinobatsira kana iwe uchida kuchinja kumashure paunenge uchitora pikicha nyowani. Iwe unogona kutora imwe pikicha uye wozodzosera kumashure iyo kumashure.
Imwe sarudzo yekutanga neiyo yekukurumidza shanduko kumashure chishandiso. Neichi chishandiso, iwe unongoda kudzvanya uye kudhonza pamufananidzo kuti utange kugadzirisa. Paunenge uchida kubvisa kumashure, iwe unongoda kubaya uye kudhonza iwo mufananidzo uye bhatani bhatani richaonekwa. Sezvauri kuona, kune nzira dzakawanda dzekubvisa nharaunda mumifananidzo. Zvisinei, zvinokurudzirwa kuti ushandise zvishandiso zvinopihwa neAdobe.
Paunenge uchida kushandura ruvara rwemufananidzo wako uchishandisa Adobe Canva, iwe unozotanga kuda kuvhura pikicha mupepeti. Muwindo rekugadzirisa, tinya pane zvivakwa uye yekutanga tab 'Zvemukati'. Pano, iwe uchafanirwa kusarudza kutanga iyo 'kumberi' uyezve iyo 'Yekumashure' zvinhu. Iwe unogona kusarudza 'hapana kumashure' kuitira kuti ungobaya pane yekutanga chinhu chakasarudzwa.
Kana iwe uchida kubvisa imwe inodzokorora pateni mumufananidzo wako, unogona kushandisa anotevera matanho: Mumufananidzo-wekugadzirisa hwindo, tinya pane 'nzira' inodonhedza menyu uye sarudza iyo 'musoro' chinhu. Wobva wanyora 'chipfeko' mubhokisi remavara uye wozodhonza uye udonhedze mufananidzo kusvika wasarudza iyo pateni yaunoda. Pakupedzisira, tinya pane 'zadza' rairo uye mirira kuti iyo pateni inyangarike.
Kunze kwenzira mbiri idzi dzataurwa pamusoro, imwe nzira huru iyo inowanzo shandiswa kana zvasvika pakubvisa kumashure mumifananidzo inzira inonzi yekucheka mashiripiti. Iwe unozoda iyo Adobe Photoshop software kuti ushandise iyi nzira. Iwe unogona kutanga nekuvhura yako pikicha mune iyo foto mupepeti. Kana pikicha yako yatakurwa, enda kune iyo yezvivakwa sarudzo uye sarudza iyo 'Clipping Magic' icon.
Izvi zvinounza skrini nyowani uye iwe uchaona iri nyore kwazvo asi ine simba mashiripiti wand chishandiso. Dzvanya pane rairo 'asso' uye fambisa mbeva yako kumakona emufananidzo wako. Kana chishandiso chekudzima chatoiswa panzvimbo yaunoda, ingobaya 'Delete' uye iro remashiripiti wand icon ichabviswa pakarepo kubva pamufananidzo wako. Iwe unogona kushandisa ingave yakajairwa museve kiyi kana iyo yekuchinja uye space bar kuti uwedzere kugona kwekubvisa.
Shanduro dzichangoburwa dzese dziri mbiri Photoshop uye Illustrator dzine sarudzo yekugadzirisa Clip Mask Layer. Kana iwe usiri kujairana nechishandiso chinowanikwa muPhotohop, iwe unofanirwa kuyedza iyi sarudzo sezvo ichinyanya kubatsira kana zvasvika pakubvisa mhando dzakasiyana dze kumashure kwemifananidzo yako. Mhedzisiro yemaitiro aya ichave kubviswa kweese asina basa ruzivo rwekumashure kubva pamufananidzo wako nekudaro nekuvandudza kunaka kwayo. Iwe unogona zvakare kushandisa chishandiso kuitira kugadzirisa saizi yemufananidzo wako wepakutanga kana iyo inoguma mufananidzo kubva kuchirongwa kuitira kuti iwe ugone kuitisa kuti itaridze kufadza.